Afar arrimood oo horyaalla madaxweynaha la doortay Muuse Biixi - BBC News Somali
Faarax Lamaane BBC, Hargeysa
Guddiga doorashooyinka jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbnaannida ee Somaliland ayaa shaaciyay in Muuse Bixii oo ku guuleystay doorashadii madaxtinnimada Somaliland ee dhacday 13-kii bishan.
Cadbiqadir Imaan Warsame Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa sheegay in musharraxa xisbiga Kulmiye uu helay 55% codadkii la dhiibtay.
Biixi ayaa waxaa horyaalla arrimo badan oo ay tahay in uu wax ka qabto, si uu u kasbado kalsoonida shacabkii soo doortay iyo xitaa kuwa aan u codeyn ee deegaannada Somaliland. Arrimaha muhiimka ah waxaa ka mid ah qodobbada hoos ku xusan.
Waxa ugu weyn halkan waa Somaliland ay sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya inteeeda kale sanaddii 1991. Farsamo ahaan, weli dunida waxay u aqoonsan tahay hal dal. Qariidada dunida weli laguma darin Somaliland, dalalka jaarka la ahna maba aysan aqoonsan, inkastoo ay ku qaddariyaan nidaamka iyo kala dambaynta iyo hannaanka dawliga ah ee ka jira.
Ugu yaraan, waxa ugu weyn ee horyaalla Muuse Biixi iyo xukuumadiisa waa inay xal u helaan deegaannada lagu muransan yahay ee u dhaxeeya iyaga iyo Puntland, iyo in meel fiican la gaarsiiyo wadahadallada kala dhaxeeya dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa laga war dhowrayaa waxyaabaha uu sameyn doono sidii u dardan gelin lahaa ictiraaf raadinta oo ah qadiyad ay ku mideysan yihiin dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Somaliland.
2020 iyo Furitaanka Xisbiyada
Image caption Gabdho saf ugu jira in ay codeeyaan
Tobankii sanaba mar baa la furaa xisbiyada Somaliland in hoggaankooda loo tartamo. Labo sano ka dib waxaa la filayaa in hoggaanka xisbiyada uu isbeddel ku yimaado oo wejiyo cusub ay hoggaanka qabtaan. Sidii uu ugu diyaargaroobi lahaa mowjadaas ku soo socota ee la saadaalinayo inay galaafan doonto ugu yaraan mid ka mid ah raggii ay wada tartameen waa arrin qorshihiisa wakhtiga fog wax ka tari karta.
Waa waxa ay dadku hoggaanka ku doortaan, hoggaanna uu bulshadiisa ugu adeego. Waxaa looga fadhiyaa in uu ka dhabeeyo ballanqaadyadii uu sameeyey xilligii uu ku jiray ololaha doorashada.Waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah wax ka qabashada shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta Somaliland taasoo ku qaaday in dhalinyro badan oo reer Somaliland ah ay tahriibaan.